Dhaabanii waligaltee Atlantiik kaabaa ykn NATO jedhamee beekamuu waa’ee yaadaa tarsiimooo isaa fooyyesuu irratii maryachuudhaaf Magaala Birasels keesatii walgahii isaa jalqabeera. prezidaantiin yunaayitud isteetes Joo Bayiidan hirmaataniiru.
Akka barreesaan dhaabichaa Jeena Stolteengeg jedhanitii dhaabatichii galmee isaa kan fooyysse 2010 akka ta’ee dubbatanii ergaa yeroo sanaatii kaasee sodaan nageenyaa fi yaaddoon akka geeddaramee himan.
Fakkeenyaaf Yaada tarsiimoo ammaa keessatii chayinaan bakka tokkotiyuu maqaan ishee hin kaane. Waa’een haala jijjiramaa qilleensaa immo jabeenyaan ka’eera. Waliti dhufeenyee raashaa wajjin qabnuu yeroo Sanaa iraa amma bakkaa addaa ta’e qaba >> kan jedhan bareesaan dhabichaa, hanaga waraanaa dilallaaawa irraa kaasee yoo ilaalee haalli raashaa wajjinii amma zero iraa jira. Lollii hedduu wal xaxan karaa internaatii , garuu geedaram akka agarsiisee gazeexeesotatti himaniiru.
Natoon yaadaa jijjiirraa tarsiimoo kana baraa Doonald Traamp Amerikaa hogganna turan kaasuu hin barbaane . sababnii isaas biyyootan Awuroopa warrii miseensa Nato ta’an waan Bulchiinsii Traamp jedhu waan hin beekeneef ture Jedhan Wiirtuu wiilson ( Wilson Center) keessatii Daarcteerii Sagaantaa awuroopaa idilee adduunyaa. Daan Hamilton.